နည်းပညာနှင့်သီတင်းရပ်ဝန်း: Joomla ၀ဘ်ဆိုက်တစ်ခုဖြစ်အောင် ဘယ်လို တည်ဆောက်မလဲ
ဒီစာအုပ်ကတော့ joomla ၀ဘ်ဆိုက်တစ်ခုလုပ်ဖို့အတွက် ရေးပေးထားတဲ့ စာအုပ်လေး တစ်အုပ်ပါ . အတော်လေးအဆင်ပြေပါတယ် . နားမလည်တဲ့သူတွေလဲ ဖတ်ပြီးတော့ လက်တည့်စမ်းကြည့်ပေါ့ . အဆင်ပြေမှာပါ . ကဲလိုချင်ရင် အောက်မှာ download ဆွဲလိုက်ပါ
Download ifile.it | Mediafire | Zshare | Ziddu | Megaupload
Posted by Hajee Than Hla Oo at 12:52 AM